Sangano reZimbabwe National Network of People Living with HIV, kana kuti ZNNP+, rinoti riri kushushikana zvikuru kuti nhengo dzaro dzakawanda hadzisati dzava kushandisa mushonga unonzi unodzikisa hukasha pamwe nekupararira kweHIV/AIDS mumuviri wemunhu anorarama neHIV/AIDS.
Mumwe mukuru mukuru musangano reZNNP+, VaClarence Mademutsa, vanoti mushonga mutsva weDolutegravir, kana kuti DTG, uyo wakaparurwa muZimbabwe gore rakapfuura, hausati wava kupihwa vanhu vakawanda vanorarama neHIV/AIDS munyika.
VaMademutsa vanoti vanhu vanorarama neHIV/Aids vakawanda vaifanirwa kunge vakatanga kunwa mushonga weDTG gore ra 2019 risati rapera. VaMademutsa vanoti vanhu havafanirwi kuramba vakamirira mushonga weDTG, sezvo wakanakira kuvanhu vanorarama neHIV/AIDS.
VaMademutsa vanoti dzimwe nhengo dzesangano ravo dzanga dzichinetseka pakushandisa mushonga we Efavirenz, nokudaro chinhu chinenge chakanaka kuti vanhu vakawanda vashandise DTG sezvo mushonga uyu usina hukasha hunovhiringa hutano hwevanhu vanorarama neHIV/AIDS..
VaMademutsa vanoti havasati vave neruzivo rwekuti vanhu vangani vanofanirwa kunge vachipihwa DTG.
Asi mumwe mudzimai asina kuda kudomwa nezita rake anoti vanhu havafanire kumanikidzwa kuti vapinde muchirongwa cheDTG, sezvo vamwe vanhu, vakaita saivo, vasina dambudziko nemishonga yavari kunwa pari zvino.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvehutano, Dr Obadiah Moyo, kuti zvii zvakanakira mushonga mutsva uyu, uye kuti seyi vanhu vakawanda vasati vava pahurongwa hweDTG sezviri kutaurwa naVaMademutsa.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvirwere mubazi rezvehutano, Dr Clorata Gwanzura, vanoti mushonga weDTG mushonga mutsva unobatsira kudzikisa hukasha hweHIV.
Dr Gwanzura vanoti bazi rehutano rinogara richiita ongororo dzekuona kuti ndeupi mushonga ungave nani pakubatsira vanorarama neHIV/AIDS.
Dr Gwanzura vanoti ongororo yakaitwa inoratidza kuti DTG inobatsira zvikuru mukudzikisa hukasha hweHIV munguva pfupi mushure mekunge munhu atanga kunwa mushonga uyu.
Zimbabwe imwe yenyika shoma dzemuAfrica dzava kushandisa mushonga weDTG uyo wakatambirwa zviri pamutemo muAmerica mugore ra 2013, mushure mokunge nyanzvi dzehutano dzaona kuti mushonga uyu waibatsira zvikuru kudzikisa hukasha hweHIV/Aids.